5 Nafaqo Oo Qof Kasta U Baahayahay - Daryeel Magazine
5 Nafaqo Oo Qof Kasta U Baahayahay
1- Iron (macdanta jirka)
Macdanta jirka Waxa uu muhiim u yahay koritaanka iyo horumarka jirka. Haddii aadan lahayn macdanta birta oo ku filan jirkaaga waxaa laga yaabaa: in aad daal dareentid -in ay kugu adkaato in aad fakartid ama aad xoog-saartid fahanka -in ay kugu adkaato in aad waxbaratid
Talo- Siin! Si aad ugu caawisid in jirkaaga uu isticmaali macdanta birta(ironta):
-Cun cuntooyin ku badan fitamiin C marka la joogo waqtiyadda cuntadda. Kuwaani waa liinta oranjiga, casiirka liinta oranjiga,
miraha kiwiga, yaanyo iyo madax-cagaar. Tani waxay ku caawinaysaa jirkaaga in uu isticmaalo macdanta birta(ironta):
Calcium waa macdan muhiim ah oo adkaysa lafaha iyo ilkaha. ilaha ugu fiican ee laga helo calcium waxaa ka mid ah, caanaha, digirta madow, yicibka iyo isbiinajka.
3- Vitamin D: Vitamin D waxuu u fiican yahay habsami u shaqaynta ilkaha iyo lafaha haddii la waayana waxaa qofka ku dhaca cudurka loo yaqaano Rickets oo ah cudur lafaha lugaha qalqaloociya waxaana laga helaa caanaha, subagga, kalluunka, iyo beedka.
Magnesiumka jirka aad ayuu muhim ugu yahay , siiba lafaha iyo murqaha ay xoojiyaan ama ay ka qayb galaan dhismahooda
Qofka wayn wuxu u baahanyahay 300-400 Milligramm maalinti oo macdanta Mg (Magnesium), intaas wayka badan kartaa haduu qofka jirooyinka qaar qabo, sida maacanka ama sokorowga. Hadii ay macdanta Magnesium jirka ku yaraado , wuxu keena lafo xanuun iyo murqa xanuun.
5- Macdanta Omega-3 Fatty Acid:
Macdanta Omega-3 Fatty Acid oo laga helo kalluunka, isla markaana aannu jirka bani aadamku soo saarin waxay unugyada neerfisyada ka caawisaa inay farriimaha jirka si fiican u gudbiyaan, xiriir wada shaqayneedna ka dhex dhaco dhexdooda, khubaradada caafimaadka ku xeel dheer ayaa carruurta iyo dadka waaweynba kula talinaya inay toddobaadkii laba jeer ugu yaraan ay cunaan kalluunka, taasoo ay si gaar ah u door bidayaan isticmaalka salliidiisa.
Muhiimada Lowsku U Leeyahay Caafimaadka Lafaha Caruurta Maxaa Ku Dhacaya Jidhkaaga Haddii Aad Maalin Kasta Cunto 3 Xabbo Oo Timir Ah?? Qof kasta Waxaa Heysa Dhibaato U Gaar Ah Ka Faaidayso Dhakhtarka: Talooyin Anfacaya Qof Kasta Oo Doonaya Inuu Miisaanka Iska Dhimo